al-ma’muun muqdisho | Almaschool's Blog
Ururka Ahlu-Sunna Wal-Jameeca oo machadyo waxbarasho ka sameeyey Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Dhuusamareeb & Guriceel
Sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka jimciyadda waxbarashada Al-Ma’muun Sheekh Cumar Cali Rooble waxa ay ururka Ahlu Sunna Wal-Jameeca ay ka fureen machadyo waxbarasho magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso, Dhuusamareeb, Guriceel & Dhuusamareeb, wuxuuna xusay in magaalada Muqdisho ay ka furan yihiin 5 machad oo loogu magac daray machadyada Al-Maa’muun kuwaasoo ku kala yaala Siinaay, Cali-Kamiin, agagaarka xaafada Bangaariyo ee degmada Hodon & Black Sea.
Mar uu ka hadlayey Sheekh Cumar guddoomiyaha machadka Siinaay ardayda wax ku barata machadkaasi wuxuu sheegay in ardayda wax ka barata machadkaasi ay yihiin arday fara badan oo gaaraya dhowr boqol, kuwaasoo u kala baxa labo qeybood kuwo daraasaadka caadiga ah & qeybta dadka waaweyn oo iyaguna machadka wax ku barta maalmaha Khamiista & Jimcaha.
Jaamacadda Al-Azhar ayuu machadka Al-Ma’muun xiriir la leeyahay, waxaana si toos ah ardayda uga qalin jebisa kaalimaha horayna ku baasa qaadata Jaamacada Al-Azhar ee dalka Masar” ayuu yiri Sheekh Cumar Cali Rooble oo intaasi ku daray in Jimciyada waxbarashada Al-Maa’muun uu guddoomiye ka yahay Macalin Max’uud Sheekh Xasan.
Waxaa diyaariyey Axmed Max’ed Cabdulle (Uurdoox)
warbxin kusaabsan taariikhda machadka al-ma’muun
Warbixin ku saabsan Machadka Al-Ma’muun
Posted to the Web Sep 06, 08:44
Muqdisho – Juun 04, 2006 – Machadkaaan oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo illaa 8 laamood ku leh goballada Soomaaliya ayaa waxaa la furay sanadkii 2001-dii. Wuxuu machadku aqoonsi rasmi ah ka helay jaamacadda faca weyn ee Al-azhar shariif ee dalka Masar, iyadoo jaamacadda Azhar ay machadka gacan ka siiso dhanka manahajka iyo shahaadada dugsiyada dhexe iyo sare iyo kandhexeba. Waxaa xusid mudan in ardeyda ka baxa Machadka Al-ma’muun laga qaddariyo jaamacadda Azhar.
Waxaana kaloo jirta in arday kudhow ilaa 13 arday ay deeq waxbarasho siisay jaamacadda Alzhar, halka ardey gaareysa 15 ay waxbarasho ka heleen jaamacad ku taalla dalka Yemen oo la yiraahdo Ahgaff University, waxaana kale oo uu machadka Alma’muun xiriir toos ah la leeyahay jaamacado kale oo ku yaalla Liibiya.
Waxaa Machadka ka qaatay shahaadooyinka dhexe iyo sare ardey ku dhow illaa 600, waxaana wax ka dhiga qaar ka mid ah macalimiintii hore ee dalka. Sidoo kale waxaa machadka laga bixiyaa siminaarro caafimaad iyo aqoonta kaleba isugu jira oo ay bixiyaan khubaro ku takhasusay culuumtaas.
Siraajudiin sh/mohamed diirshe Says:
Almamuun waa machadyada hada kajira somalia logu aqonsibadanyahay wana machadtayo ledahay waxa uu kubarayo
Posted on May 13, 2012 at 9:10 pm